Maamulka gobolka Mudug oo cambaareeyay dilkii marxuum Aaden dheere iyo afduubkii rakaab ka yimid Galdogob. – Radio Daljir
Maamulka gobolka Mudug oo cambaareeyay dilkii marxuum Aaden dheere iyo afduubkii rakaab ka yimid Galdogob.
Nofeembar 20, 2012 8:59 b 0
Gaalkacyo, Nov 20 – Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) oo maanta Shir-Jaraa’id ku qabtay Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay dhacdooyinkii ammaan xumo ee is xig-xigay ee ka dhacay gudaha iyo daafadaha magaalada Gaalkacyo.
Gudoomiyaha ayaa ugu horayn ka hadlay dilkii xalay xaafadda Garsoor loogu gaystay AHN ganacsade Aden Faarax Axmed (dheere) oo ka mid ahaa dadka maskax iyo maalba ku bixin jiray arimaha nabad-galyada gobolka iyo waliba xalinta khilaafaadyada soo kala dhex gala bulshada ku nool gobolka.
Tigey ayaa carabka ku dhuftay in ganacsadahaasi ay dileen kooxihii horay u layn jiray indhaha bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa PL oo uu ula jeedo kooxda Alshabaab, waxaase gudoomiyuhu tilmaamay inay wadaan baaritaan ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dhagar-qabayaashii falkaasi ka danbeeyay si sharciga loo horkeeno, gudoomiyaha ayaa geesta kale shacabka ugu baaqay inaysan quusan oo aysan isu dhiibin kooxaha caadaystay inay wax-garadka madaxa ka jabiyaan oo uu hada tilmaamay inay bur-bureen.
Gudoomiyaha ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray in marxuum Aaden dheere dilkiisa loo fuliyay aano qabiil oo si aan cadayn uu u taabtay gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur.
”Marxuumkaasi wuxuu qayb ka ahaa waan-waantii nabadeed ee laga waday xaafadda Garsoor dagaalkii ka dhacay sanadkii hore, iyo hawl-gal dhawaan ciidanka Puntland ay ka sameeyeen degmada Galdogob oo uu ka soo jeeday, wuxuuna ahaa nin ka qayb qaata kulamada nabadeed iyo uruurinta dhaqaalaha tabarucaada ee bulshada dhexdeeda”, Ayuu yiri mudane Tigey.?
Gudoomiyaha Mudug ayaa dhanka kale waxaa uu si kulul u cambaareeyay fal afduub rakaab oo shalay galbeedka Gaalkacyo loogu gaystay shan qof oo ka yimid degmada Gal-dogob, falkaasi ayuu ku micneeyay inay fuliyeen maleeshiyo hubaysan oo ka soo jeeda koonfurta Gaalkacyo ee maamulka Gal-mudug, kuwaasoo sabab oga dhigay mid ka mida labo nin oo maalmo ka hor ay gacanta ku dhigeen isagoo qarax wata bartamaha magaalada Gaalkacyo.
Gudoomiyuhu waxaa uu sheegay inay dhac-dadaasi dhaawacayso daris-wanaaga iyo wada noolaanshaha bulsho weynta labada dhinac ee Gaalkacyo, iyo waliba labada maamul ee Puntland iyo Gal-mudug, wuxuuna ku baaqay in si deg-dega afduubanayaashaasi loo sii daayo, si aysan oga dhalan cawaaqib xumo.
Maxamed Yuusuf ayaa xusay in ragga lagu qabtay hubka iyo qaraxyada ee Garoowe loo gudbiyay la baari doono haddii danbi lagu helana sharciga la marsiin doono haddii lagu waayana la sii dayn doono, isagoo ciddii arintaas wax ka tabanaysana ugu baaqay inay qaab sharciyaysan ay u maraan xalinteeda.
Dhanka kale sargaal u hadlay Galmudug ayaa sheegay in ragga la qabtay mid ka mida oo ka soo jeeda koonfurta Gaalkacyo haba yaraatee uusan lahayn wax danbiya, qabashadiisana ay ahayd mid lagu waxyeelaynayo muwaadin Galmudug iyo maamulka halkaasi ka jiraba, wuxuuna ku sheegay inuu ahaa ganacsade ka fog falal abaabulan.
Arimahan oo dhan ayaa marka la eego waxay u muuqanayaan kuwo gobolka ka dhalin kara xiisad ka dhex aloosanta maamulada Puntland iyo Galmudug iyo waliba beelaha ay ka soo kala jeedaan dadkii la afduubtay iyo dhinaca ay ka soo jeedaan maleeshiyaadkii wax afduubtay.
Caawa iyo Daljir,Arbaca_ Nov 20-2012, Axmed Nuur Ibraahim (Somali)_Daljir Boosaaso
Maamulka gobolka Mudug oo ka hadlay dhacdooyin xalay ka dhacay Galkaco (Dhegayso)